Uyenza njani i-GIF yoopopayi kwiFotohop ngokukhawuleza nangokulula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Njani Yenza a GIF ophilileyo kwi Ifotohop ngokukhawuleza kwaye ngokulula akusekho ngxaki enkosi Photoshop, isixhobo esinezixhobo zokuphinda ubambe ifoto, kodwa ubusazi ukuba unokwenza GIF nge Photoshop ngokukhawuleza okukhulu? ezimbalwa nje Imizuzu ye10 kuxhomekeke kubunzima boopopayi bakho unokwenza into emnandi GIF ekuhambeni kokusebenzisa naphi na apho ufuna khona. Intuitive kwaye ngamanyathelo ambalwa kakhulu Photoshop iyasivumela sebenza ngokuhamba ngexesha elifanayo njengoko senza ukuphinda sithathe isithombe.
Inye kuphela udinga ukwenza i GIF ophilileyo kwi Photoshop es Fumana umbono wokuba ufuna ukwenza njani oopopayi kwaye ulungiselele yonke imifanekiso eyimfuneko ukwenza oopopayi. Olu hlobo loopopayi lusekwe kwi- izakhelo zokwenza intshukumo ifana kakhulu neAdobe Philisa. Photoshop ivumela ukuba sizimele kwaye sishiye izakhelo ezibonakalayo ukuqala ukudala intshukumo. Kolu hlobo loopopayi, isakhelo ngasinye yintshukumo, ke ngoko kufuneka sitshintshe izinto ezikwelinye ixesha ngalo lonke ixesha sifuna ukwenza intshukumo. Ilula, iyakhawuleza kwaye inomdla kakhulu.
Kule meko siza kwenza ifayile ye- GIF ukuqhwanyaza apho i icon iyakutshintsha ukubonakala kwayo, kamva siya kongeza ifonti.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuthatha i- imenyu yoopopayi, ngenxa yoku siya kwithebhu window / ixesha de Photoshop. Sele sibonile umgca wexesha kwezinye iinkqubo zeAdobe: I-Animate, INkulumbuso, Emva kweempembelelo nazo zonke iintlobo zeenkqubo ezihlela ividiyo okanye oopopayi.
Nje ukuba ixesha lethu likulungele, into esiya kuyenza kukuqala yenza izakhelo. Isakhelo ngasinye ukuba sijonga ngokusondeleyo sine-icon enesibali sexesha emazantsi, eli counter liya kuphawula ubude besakhelo. Umbono woopopayi ngu Ukutshintsha phakathi kweendlela zemifanekiso yethu kunye nexesha lazo, Ibhokisi nganye yesakhelo yintshukumo (tsiba kwimeko ye icon) xa sitshintsha ubume be icon. Ngamafutshane, into ekufuneka siyenzile ukutshintsha isakhelo icon kunye nenye ngaphandle kwe icon, ngale ndlela iya kubonakala ngokungathi iyadanyaza.
Ukuba sijonga umfanekiso ongentla sibona indlela ukubonakala kwe icon yethu kuguqulwe ngayo, ngaloo ndlela kufezekiswa isiphumo sokudanyaza. Kwenzeka into efanayo ngokuchwetheza, sinokutshintsha ukuhamba kwayo nangayiphi na indlela enokubakho: ubungakanani, umbala, imilo ...
El ixesha lesakhelo ngasinye Kuya kuxhomekeka kwinto esiyikhangelayo neyethu GIFUkuba sifuna isantya esingaphezulu siya kunika ixesha elincinci kwisakhelo ngasinye, kwelinye icala ukuba sifuna isantya esincinci siya kunika ixesha elininzi kwisakhelo ngasinye.
Inyathelo lokugqibela liquka thumela ngaphandle yethu GIF, koku siya kwimenyu yefayile Photoshop kwaye sikhetha ukhetho lokuthumela ngaphandle kwiwebhu.
Ngexesha elifutshane kakhulu sikwazile ukwenza ifayile GIF usebenzisa oopopayi Photoshop, Esona sixhobo sibathandayo kubo bonke abo bathanda uyilo kunye nokufota. Khumbula ukuba kuphela komda ekwenzeni nantoni na kukucinga kwethu. Yenza zonke iintlobo ze GIF kunye nokuziqhelanisa ngaphandle kokuma de ube uyayazi kakuhle le ndlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Uyenza njani i-GIF yoopopayi kwiFotohop ngokukhawuleza nangokulula
UMaria Sol Nieto sitsho
UJulio Eduardo ukuze bangathethi nam kamva! : D
Phendula uMaría Sol Nieto